N'ogbe Ndị ikom Crewneck Chest Pocket Cotton Bipụtara T-uwe Nsuputa na Suppliers | Yiwan
N'okpuru (mkpụmkpụ na uwe ogologo ọkpa)
Grey Crew Neck Squid Game Printing Classic Cotton Sw...
Nke mara mma Burgundy Terry zipa obere akpa nwere ụkwụ jog...
Ndị ikom omenala na-atọ ụtọ beige Terry Lounge Sweatpants
Akpa ndị nwoke gbara ọchịchịrị Green Terry Jogger Lounge Pants
Omuma owu Sky Blue Plain Tapered Leg Sweatpants
Ime ụlọ ezumike French Terry mara mma dabara adaba ...
Okporo ụzọ ndị nwoke osise eserese na-agbanwe agbanwe ikpere oroma S...
Omenala dị fechaa na-agba mkpụmkpụ mkpirisi gbatịa akwa Jer...
Nkecha fechaa French Terry Raw Cut Lounge Swea...
Ogologo ikpere ogologo ọsụsọ ọsụsọ ogologo ọkpa Heather agba ntụ.
Ndị ikom nkịtị n'akpa uwe anọ Owu Terry Sweat Shorts
Nkecha Zipper Velvet uwe ogologo ọkpa owu ngwakọta Velor Loun...
Omenala emere Khaki Cotton Ngwakọta Ajị anụ mkpụmkpụ Sweatpants
Ogologo ikpere ogologo ọsụsọ Sweat Shorts Cotton French Terry Loopbac...
Ụmụ nwoke mara mma nwere ụkwụ Cotton Terry Zipper Jogger P...
Akpa Chic Atọ Akpụkpọ anụ Ajị anụ na-agba mkpụmkpụ
Omenala Mere Men Pocket Fleece Lounge Sweatpants
Ndị nwoke mara mma eriri n'úkwù Khaki Cotton Twill Shorts
Ndị ikom Crewneck Chest Pocket Cotton Ebipụtara T-uwe
T-uwe elu akpa akpa ndị ọrụ olu olu
1. Akpa Chelsea
2. Nbipụta omenala
3. Streetstyle menenwear
4. Kwesịrị ekwesị mgbe niile
Aha ihe Ụmụ nwoke Crewneck Chest Pocket Cotton Ebipụtara T-shirt Ihe mejupụtara Owu
Logo Mbipụta, embroidery… ahaziri Nha XS-XL, gbakwunyere nha dị
Oge nlele 8-10 ụbọchị ọrụ mgbe nkwenye niile nkọwa MOQ 100pcs kwa style otu agba
Yiwan Apparel Co., Ltd malitere site na otu obere otu ma ugbu a na-eto eto ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ uwe na-emepụta onwe ya maka ịchịkwa ọnụ ahịa na inyere ndị ahịa aka ịmepụta atụmatụ ọhụrụ nke ọma.
Ọpụrụiche na uwe ihe kpatara ụmụ nwoke, t-shirts, hoodie & sweatshirts, mkpirisi na uwe ogologo ọkpa, ect. Ma nabata atụmatụ omenala nwere obere MOQ 100pcs kwa ụdị kwa agba.
Na 30,00 square mita. Ihe karịrị 100 mmadụ. Dị na Dongguan, China, nke bụ mpaghara ụlọ ọrụ uwe mechiri nnukwu akwa na ahịa ngwa ahịa, nke na-agbanwe agbanwe maka ihe ejiji kachasị ọhụrụ.
na ihe onwunwe ngwa ngwa mbata. mechiri n'ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen na Guangzhou nke dị mfe na ngwa ngwa maka mbupu.
With ákwà na-enyocha igwe na igwe na-ebu ụzọ na-ebelata iji dobe ákwà dị mma maka ime ka ịzere ntụpọ ákwà.
Endị ọrụ nwere ahụmahụ na-arụsi ọrụ ike maka ịlele nke ọma.
7 mmepụta ahịrị na-ekwe nkwa ozugbo na gburugburu.
Aigwe dvanced na ngalaba ọkachamara ọkachamara QC maka njikwa njikwa na ngwaahịa zuru oke.
Young omiiko na ọkachamara ahịa otu maka n'oge na-aza maka ngwa ngwa oru oma nkwurịta okwu na tupu-ire ahịa, ahịa na mgbe-ahịa.
Anyị dị oké njọ na usoro ọ bụla, na-elekwasị anya na nzọụkwụ ọ bụla, na-ahụ maka akụkụ ọ bụla ma na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka ihe dị mma na nke ọma.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ihe anyị ma ọ bụ ịchọrọ ikwurịta usoro omenala, jide n'aka na ị nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya ka anyị na ndị ahịa ọhụrụ gburugburu ụwa nwee mmekọrịta azụmahịa na-aga nke ọma n'ọdịnihu dị nso.
1.Closed na ákwà na ngwa ahịa ahịa, na-agbanwe na ejiji ejiji na ihe onwunwe.
2.Mechie ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen na Guangzhou, dị mfe maka mbupu ngwa ngwa.
3.Skilled ahụmahụ ọrụ na-eme ka usoro na-aga nke ọma.
4.Ọkachamara ndị ọrịa na-ere ahịa maka nkwurịta okwu nke ọma.
5.Custom ọrụ gụnyere mbipụta, embroidery, embossing, chenille…ect
Q1: Kedu ọrụ omenala ị na-enye?
A1: Akara ngosi ahaziri ahazi, mkpado, akara na trims ahaziri ahazi ga-ekwe omume. Ụdị squid omenala dị.
Q2: Enwere m ike ịme nha omenala?
A2: Ee, nke ahụ ga-ekwe omume. Anyị nwekwara ike igosi gị ntụaka nha.
Q3: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A3: T / T, Ego gram, 40% nkwụnye ego n'ihu, 60% itule tupu nnukwu Mbupu
Nke gara aga: Omenala ndị ikom Tee Cotton Jersey Slim Fit T-shirt
T-uwe elu akpa obi
tshirt siri ike
T-shirts ndị ikom na-adịghị ahụkebe dabara adaba
Chic Designer Short Sleeve Cotton Jersey Stripe...
Chic Street Style ụmụ nwoke obere akpa akpa ukwu...
Ndị nwoke kpochapụwo 60 Cotton 40 Polyester Pink V-olu ...
Adreesị: 201, 2rd Fendxing 3rd ụzọ, obodo Beizha, Humen obodo DongGuang obodo GuangDong Provice, China
Ọnọdụ sitere na Izu Ejiji Milan
Usoro sitere na izu Ejiji Milan 2021.10.14 Kemgbe izu Ejiji Milan na Septemba 2021 bịara na njedebe, Ugbu a ka anyị chịkọta usoro 9 kachasị amasị na ihe ngosi ejiji nke izu a. 2000s Ejiji nke narị afọ iri na ihe niile na-emegide ya bụ mkpali n'azụ Dolce & Gabba ...
Oriri ike njikwa abụọ
Dị ka anyị niile maara na coal bụ ike dị oké mkpa maka ọkụ eletrik, ma ebe ọ bụ na ọnụ ahịa coal na-arị elu nke ukwuu, ọ na-emetụta ike ọkụ eletrik. Iji mee nguzozi n'etiti ikuku carbon, nchebe gburugburu ebe obibi na ikike mmepụta, ikekwe ị chọpụtala na "d ...
Amụma nke ụda akwa 2021/2022
Agba dị mkpa karịsịa maka iyi. Agba ndị na-ewu ewu dị iche na afọ ọ bụla na oge ọ bụla. Nchịkọta agba nwere nkà ga-eweta echiche ejiji karịa. Pantone ewepụtala ụfọdụ agba ama ama n'oge ihe ngosi ejiji mgbụsị akwụkwọ / oyi 2021/2022. N'ebe a, anyị weere 7 agba maka ihe atụ. Ka anyị...
Ọ nweghị ihe nwere ike ịgbanarị mmetụta nke Covid-19, gụnyere mbupu, ọkachasị maka mbubata & mbupu. Dịka akụkọ kachasị ọhụrụ na Ọgọst 10, enwere otu ikpe achọtara na ọdụ ụgbọ mmiri Ningbo Zhoushan, onye na-arụ ọrụ ebe a. Mgbe ahụ, a ga-akwụsịrịrị ọrụ niile n'ime akpa akwa. Ka ọ dị ugbu a, saịtị ndị dị mkpa nwere...
Uwe nwoke! Ụdị okporo ámá!
Ọ dị oke n'oge ịkọ ụdị usoro nchịkọta uwe ụmụ nwoke nke 2022 - na ụdị okporo ụzọ - ga-ebupụta, mana ọ bụghị ihe gbatịa iche n'echiche na ọ nwere ike ịmalite ebe ọ kwụsịrị n'oge ọrịa tupu ọrịa. Uwe uwe nwoke nke 2020 nke oge opupu ihe ubi na-egosi ihe dịka June 2019 hụrụ ụzọ ụzọ ime obodo na-arị elu na mkpali, site na exp ...
Soro akwụkwọ akụkọ anyị